အထာပိုင် တဲ့ မမများ – Hlataw.com
မောင်ဇော်အိပ် ယာကနိုးတော့ မနက် (၈)နာရီခွဲကျော်နေပြီ ကျူရှင်မရှိတာနဲ့ အိပ်ရေးဝအောင်အိပ်ပစ်လိုက်တယ်။ မနက်စာစားဖို့ထမင်းစားခန်းထဲဝင်တော့ မနီလာက ဟင်းချက်နေတယ်။ မောင်ဇော်ကော်ဖီတစ်ခွက်ဖျော်သောက်ရင်း စိတ်ဝင်စားစရာမြင်ကွင်းတစ်ခုတွေ့လိုက်တယ် နီလာတစ်ယောက် အင်္ကျီနဲ့ဂါဝန်ထွဲထားတဲ့ ဂျင်းဝတ်စုံဖါးဖါးကြီးဝတ်ထားတယ်။ အဲဒီဂျင်းဝတ်စုံက ကြယ်သီးတွေ တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး တော်တော်ကျဲတယ်။ အိမ်နေရင်းဆိုတော့ နီလာလည်း ဘရာစီရာဝတ်မထားဘူး ……။ မောင်ဇော်ကော်ဖီသောက်ရာကနေ ဘေးတစောင်းနဲ့ခုံမှာထိုင်ပြီး ဟင်းရွက်လှီးနေတဲ့နီလာ……… လူကလည်းရှေ့ခပ်ငိုက်ငိုက်၊ ဂျင်းအင်္ကျီအသားကလဲမာမာ၊ ကျယ်သီးကလည်းကျဲကျဲဆိုတော့ …….. ဘေးကထိုင်ကြည့်နေတဲ့ မောင်ဇော်တစ်ယောက် သူ့အစ်မဖြစ်သူနီလာရဲ့နို့တစ်လုံးကို ကျယ်သီးနှစ်လုံးကြားဟနေတဲ့နေရာကနေ အတိုင်းသားမြင်နေရတယ်။ ဖွားဖက်တော်လဲထောင်လာပါလေရော…. ကြည့်လို့ကောင်းနေတုန်း နီလာဆတ်ခနဲဆို မောင်ဇော့ဘက်လှည့်လိုက်တယ်။
သူခိုးလူမဖြစ်သွားလို့ မောင်ဇော်လန့်သွားတယ်။ ……. နီလာက မောင်ဇော့ကို “နင်ဘာတွေကြည့်နေတာလဲ” မောင်ဇော်က “ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး” နီလာက “ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလုပ်မနေနဲ့ စားပြီးရင်ငါ့ကိုနည်းနည်းလာကူဦး ဒီနေ့ညအိမ်မှာ ဟော့ပေါ့လုပ်စားကြမယ်။” “ဘယ်သူတွေပါမှာလဲ” “ငါရယ်၊ နင်ရယ်၊ ဖြူဖြူမောင်ရယ်၊ ဝေဝေခိုင်ရယ်ပေါ့” မောင်ဇော်က “ သူတို့နဲ့ ငါမှသိပ်မခင်တာ” နီလာက “နောက်တော့ခင်သွားမှာပေါ့ ….နင်ကလည်း… လာစမ်းပါ ။ ငါ့သူငယ်ချင်းတွေက ချောလည်းချောပါတယ်။ ခင်လည်းခင်တတ်ပါတယ်၊ ပြီးတော့ ငါတို့ဘီယာတွေလည်းသောက်ကြမယ်လေ။ ဖြူဖြူမောင်တို့နှစ်ယောက် အခုပဲဒဂုံစင်တာမှာ ဘီယာသွားဝယ်ကြတယ်။“ ဘီယာဆိုတဲ့အသံကြောင့် မောင်ဇော် ခေါင်းထောင်သွားတယ် ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ….. ဟော့ပေါ့နဲ့ ဘီယာ နှစ်ခုစလုံးမောင်ဇော့အကြိုက်တွေပဲလေ။ ……. မောင်ဇော်က “ကောင်းတယ်…. ငါလည်းပါမယ်….. ဒါပေမဲ့ နင့်သူငယ်ချင်းတွေပြောထားနော်… ငါ့ကိုမစနဲ့လို့” နီလာက “ အေးပါ …. ကဲလာ ဒါတွေရေသွာဆေး၊ ပြီးရင်ရေခဲသေတ္တာထဲကပုဇွန်ထုတ်ခဲ့” မောင်ဇော်တစ်ယော် ဘီယာနှင့် ဟော့ပေါ့ဆိုသော မျက်နှာများကြောင့် နီလာခိုင်းတာတွေကို တကုတ်ကုပ်ကူလုပ်နေပါတော့သည်။ ည ….. ဖြူဖြူမောင်၊ ဝေဝေခိုင်၊ နီလာနှင့် မောင်ဇော်တို့ (၄) ယောက်…. ဘီယာသောက်ပြီးဟော့ပေါ့စားနေကြသည်။
ဖြူဖြူမောင်တို့ဝယ်လာတဲ့မြန်မာဘီယာသံဗူးနှစ်ဖါကိုဖေါက်ပြီး သောက်ကြတယ်။ တစ်ယောာက်ကိုဘီယာနှစ်ဘူးစီလောက် ဝင်သွားတော့ အားလုံးရီတီတီဖြစ်လာတယ်။ မောင်ဇော်နဲ့ ဖြူဖြူမောင်တို့သူငယ်ချင်းတတွေလည်း ပိုပြီးရင်းနီးလာတယ်။ ဘီယာ သုံးဗူးစီလောက်လဲဝင်သွားတော့ ဟော့ပေါ့လည်းစားလို့ပြီးသွားပြီ …… အားလုံးရီတီတီနဲ့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် နောက်တာ ပိုပြီးအတင့်ရဲလာတယ်။ ဖြူဖြူမောင်က “ငါတို့ဖဲရိုက်ကြရအောင်” နီလာက “ကောင်းသားပဲ”ဆိုပြီးဖဲထုတ်သွားယူတယ် ….. နောက် …. “အိမ်ရှေ့ကြီးမှာမကောင်းဘူး ငါ့အခန်းထဲမှာဆော့မယ်”ဆိုပြီး မီးဖိုထဲက လဘက်ရည်ပန်းကန်လေးတစ်ချပ်ပါယူပြီးအခန်းထဲ ဦးဆောင်ဝင်သွားတယ်။ နောက်က ကျန်တဲ့သူတွေလိုက်ဝင်ကြတယ်။ တစ်ယောက် ဘီယာတစ်ဗူးစီလဲဆွဲလာတယ်။ အခန်းထဲရောက်တော့ နီလာ့ကုတင်ဘေးမှာ ဆောင်တစ်ထည်ကိုကျကျနနခင်း ပန်းကန်လေးကိုအလယ်ချလိုက်တယ်။ မောင်ဇော်က ဖဲဝိုင်းထဲဝင်ထိုင်ရင်း နီလာ့ကုတင်ခြေရင်းမှာလွှားထားတဲ့ အောက်ခံဘောင်းဘီလေးသုံးထည်ကို သေချာကြည့်နေတယ်။ ဝေဝေခိုင်က မြင်သွားပြီး “ဟဲ့ကောင်လေး ဘာတွေစိတ်ဝင်စားနေတာလဲ … အဲဒိဘောင်းဘီသုံးထည် ဘယ်သူ့ဘောင်းဘီတွေလဲဆိုတာ မှန်အောင်ပြော … မှန်ရင် မှန်တဲ့သူကနင့်ကို အဲဒိဘောင်းဘီဝတ်ပြမယ်။
” မောင်ဇော်က “ ဟာ… အစ်မကလည်း ” ဖြူဖြူမောင်က ဘောင်းဘီအပြာလေးတစ်ထည်ကို ကိုင်ပြီး “အဲဒါဘယ်သူ့ဘောင်းဘီလဲ” လို့မေးတယ် မောင်ဇော်ရှက်လို့ခေါင်းငုံ့နေတယ်။ နီလာက “ဖြေလိုက် ငါ့မောင့် အဲဒါမှနင်သူတို့ဖင်တွေမြင်ရမှာ၊ နင်တီဗွီထဲမှာကြည့်ကြည့်နေတာတွေက အရုပ်တွေအခုတွေ့ရမှာတွေက အစစ်တွေနော်” မောင်ဇော်က မရဲတရဲနဲ့ “မဝေဝေခိုင်ဟာ” လို့ဖြေလိုက်တယ်။ ဝေဝေခိုင်က “မောင်လေးမှားပါတယ်ရှင်” တဲ့ ……. နောက်ဖြူဖြူမောင်က ဘောင်းဘီ အနက်လေးတစ်ထည်ကို ထောင်ပြလိုက်တယ်။ မောင်ဇော်က “မဖြူဖြူမောင်ဟာ” မှားပါတယ် ….. ကဲနောက်ဆုံအထည်ပါဆိုပြီးဘောင်းဘီပန်းရောင်လေးကိုထောာင်ပြတယ်။ မောင်ဇောဒီဘောင်းဘီကိုကောင်းကောင်းသိတယ် မမနီလာရဲ့ဘောင်းဘီ ရေချိုးခန်းထဲမှာလှန်းထားတာ ဟိုတစ်ခါက သူတွေ့ဖူးတယ်။ မောင်ဇော်ဖြေလိုက်ပါပြီ “မမနီလာဟာ” ဖြူဖြူမောင်က “မှန်ပါတယ်ရှင်” ….. နောက် … “ကဲနီလာရေဝတ်ပြပေတော့” မောင်ဇော်သာမာန်အတိုင်းဆို အဲဒိလိုပြောဖြစ်မှာမဟုတ်ပေမဲ့ ဘီယာသုံးဗူးလောက်ဝင်ထားတော့ သိပ်စဉ်းစားမနေပဲဖြေလိုက်တာပါ။ နီလာက “ဒုက္ခပါပဲ ပေးဘောင်းဘီ” ဆိုပြီး ထဘီကိုပါးစပ်နဲ့ကိုက်ပြီး ဝတ်ထားတဲ့ဘောင်းဘီးကိုအရင်ချွတ်လိုက်တယ်။ နောက် ဘောင်းဘီပန်းရောင်လေးကု ထဘီစွပ်လျှက်နဲ့ ဝတ်မယ်လုပ်တော့… ဖြူဖြူမောင်က “ဒီလိုမရဘူးလေ ….. ထဘီချွတ်ပြီးဝတ်ရမှာ“ ဝေဝေခိုင်ကလည်း “ဟုတ်တယ် အဲလိုဘယ်ရမလဲ ချွတ်ပါချွတ် ” လို့ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ပဲ နှစ်ယောက်သားနီလာ့ထဘီကိုဝင်းချွန်ကြတယ် နီလာတစ်ယောက်ဖင်တုန်းလုံးလေးဖြစ်သွားကော ။ မောင်ဇော်ရှေ့မှာမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းကိုအကြောင်သားနဲ့ငေးကြည့်နေမိတယ်။ ရင်တွေလည်းတဒိတ်ဒိတ်ခုန်လို့ သူ့အစ်မဖင်ကို အခုမှ မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်း သေချာမြင်ဖူးတော့တယ်။
.မောင်ဇော်တစ်ယောက် သူ့အစ်မ နီလာရဲ့ဖင်ကို မျက်လုံးကျွတ်မတတ်ငေးနေတယ်။ နီလာကရှက်ရှက်နဲ့ပဲ ဘောင်းဘီလေးကို စွတ်လိုက်တယ်။ ဘောင်းဘီဝတ်ပြီးသွားတော့ ဘေးမှာပုံကျနေတဲ့ထဘီကိုကဗျာကယာကောက်ယူလိုက်ပြီး နီလာက “ကဲကဲဝိုင်းစရအောင် ” ဆိုပြီး မောင်ဇော့်ဘေးမှာဝင်ထိုင်၊ ဖဲထုတ်နှစ်ထုပ်ကို စပြီး ကုလားဖန်ထိုးပါတော့တယ်။ ကျန်တဲ့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်လဲဝင်ထိုင်ပြီး ဝိုင်းစလိုက်ပါတယ်။ စစချင်း ပိုကာဒေါင်းကြတယ်။ ပိုက်ဆံဖဲ ၅၀ ၊ ဒေါင်းကြေး ၁၅၀ နဲ့ …… နာရီဝက်လောက်ကြာတော့ ဖြူဖြူမောင်က “ပိုက်ဆံကြေးဆော့ရတာပျဉ်းစရာကြီးကွာ“ ဝေဝေခိုင်က “နင်ကအလကားကြေးဆော့ချင်လို့လား“ ဖြူဖြူမောင်က “ ငါတို့ ပိုကာ ဆော့ရအောင်လား၊ မောင်လေး ခင်မောင်ဇော် … ဘယ်လိုလဲကျောက်လား၊ တခါထည်းပြောထားမယ် သွေးမရှိရင် မဆော့နဲ့နော် “ ခင်မောင်ဇော်ကလည်း ဘီယာအရှိန်လေးနဲ့ သတ္တိတွေကောင်းနေပြီး “ စိန်လိုက်ဗျာ“ “နီလာကော ဘယ်လိုလဲ“ နီလာက “ ရတယ်လေ လုပ်လိုက်“ သိပ်မကြာပါဘူး ဆရာမကြီး ဖြူဖြူမောင်က ပိုကာ စည်းကမ်းတွေပြောပြပြီး ဝိုင်းစပါတော့တယ်။ ……… ပထမဦးဆုံးဒေါင်းသွားသူက ခင်မောင်ဇော်(ခေါ်) မောင်ဇော်ပါ။ ကောင်မလေးသုံးယောက် ပွဲဦးထွက်မှာတင်စချွတ်ရပါတော့တယ်။ အိမ်နေရင်းမှို့ တခြားအပိုအစာလက်ဝတ်လက်စားတွေ နာရီတွေ ဘာမှဝတ်မထားတဲ့အတွက် … ပထမဆုံးစချွတ်ရတဲ့ အရာဟာ သူတို့ရဲ့ အပေါ်အင်္ကျီတွေဖြစ်သွားတာပေါ့။
အစ်မဖြစ်သူ မမနီလာအပါအဝင် ကောင်မလေး သုံးယောက် မဆိုင်းမတွပါပဲ သူတို့ဝတ်ထားတဲ့ အိမ်နေရင်းတီရှပ်ကလေးတွေကို ချွတ်ပစ်လိုက်ကြတယ်။ အိမ်နေရင်း လျှော့ရဲရဲ ဘယာစီယာဟောင်းလေးတွေနဲ့ မလုံ့တလုံထိမ်းထားတဲ့ ကောင်မလေးတွေရဲ့ နို့လေးတွေကို ဘီယာအရှိန်တက်နေတဲ့ ခင်မောင်ဇော်တစ်ယောက် အားမနာတမ်းအငမ်းမရ လိုက်ကြည့်နေတယ်။ နီလာက “ကိုယ်တော်…. သိပ်ငမ်းမနေနဲ့ ဖဲထုတ်လည်း ကလားဖန်ထိုးဦး” လို့ပြောလိုက်မှ မောင်ဇော်ဖဲထုတ် ကိုကောက်ကိုင် ပြီးကုလားဖန်ထိုးလိုက်တယ်။ နီလာကပဲဆက်ပြီး “ ငါ့မောင် အဲလောက်နှာဘူးထတတ်မှန်း ငါအခုမှပဲသိတော့တယ် “ မောင်ဇော်က “မမကလည်း ဂန်ဒူးမှမဟုတ်တာ ယောင်္ကျားပဲ နည်းနည်းတော့နှာဘူးထမှပေါ့“ ဖြူဖြူမောင်က “ဟုတ်တယ် ယောင်္ကျားလေးပဲနည်းနည်းတော့နှာဘူးထမှာပေါ့ …. ဘယ်လိုလဲ မမတို့နို့တွေကြည့်လို့ကောင်းတယ် မဟုတ်လား။ ”လို့ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ပဲ သူ့နို့နှစ်လိုးကို လက်နှစ်ဘက်နဲ့ဘရာစီယာပေါ်ကနေကိုင်ပြီး ခပ်ဖွဖွလေး မောင်ဇော့်ကို ညှစ်ပြလိုက်တယ်။ ဝေဝေခိုင်က “စကားတွေသိပ်မများနဲ့ ဝိုင်းပြန်စမယ်” ဆိုတော့မှ ဝိုင်းပြန်စတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်ဒေါင်းသွားသူက နီလာပါ။… ဖြူဖြူမောင် ၊ ဝေဝေခိုင်နဲ့ မောင်ဇော်တို့ချွတ်ရပါပြီ ။ ဖြူဖြူမောင်နဲ့၊ ဝေဝေခိုင်တို့က မဆိုင်းမတွပါပဲ မတ်တပ်ရပ်ပြီးသူတို့ဝတ်ထားတဲ့ ထဘီလေးတွေကို ဖြေချလိုက်တယ်။ နောက်မောင်ဇော့် မျက်နှာဘက်ကို အတွင်းခံဘောင်းဘီပါးလေးတွေသာဖုန်းအုပ်ထားတဲ့ ကျစ်လစ်လှပတဲ့ဖင်လုံးလေး တွေလှည့် တစ်ချက်နှစ်ချက်လောင် ဖင်တွေလှုပ်ပြပြီး သူတို့နေရာတွေမှာ ပြန်ထိုင်လိုက်ကြတယ်။
ရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့ အဲဒိပြကွက်တွေကိုကြည့်ပြီးရင်မခုန်နိုင်တာကတော့ မောင်ဇော်ပါ … ဟုတ်ပါတယ် မောင်ဇော်ချွေးပြန်နေပြီး …. သူချွတ်ရတော့မယ်။. အပေါ်မှာဝတ်ထားတဲ့တီရှပ်ချွတ် ရတာယောင်္ကျာလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့သူ့အတွက် ပြဿနာမဟုတ်…… ဒါပေမဲ့ …. မမနီလာဒေါင်းသွာတာ သူပစ်လိုက်တဲ့ပစ်ဖဲကိုစားပြီး ဒေါင်းသွားတာ။ အဲဒါကြောင့် ပြိုင်ပွဲစည်းကမ်းအရ သူ အဝတ်နှစ်ထည်ချွတ်ရတော့မယ်။ …..နောက်ပြီး အိမ်နေရင်းမှာ ဂျင်းဘောင်းဘီဝတ်ထားတာဆိုတော့ အောက်ခံဘောင်းဘီလဲ ခံဝတ်မထားဘူး ……. သူ့တကိုယ်လုံးကို ဖုံးအုပ်ထားတာ ဒီတီရှပ်နဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီရယ်ပါ။ ဒီနှစ်ခုစလုံးတခါထဲနဲ့ချွတ်လိုက်ရမယ် ဆိုတော့ မောင်ဇော်ချွေးပြန်တာပေါ့။ မူးနေတဲ့ဘီယာအရသာတောင် ဘယ်ရောက်သွားသည်မသိတော့။ မောင်ဇော်တစ်ခုကြံလိုက်တယ် …. ခပ်တည်တည်နဲ့ ဝတ်ထားတဲ့တီရှပ်ကလေးကို ပဲချွတ်လို့ဘေးမှာပုံထားလိုက်ပြီး မသိချင်ယောင်ဆောင် ဖဲထုတ်ကောက်ကိုင်လိုက်တယ်။ အဲလိုလူလည်ကျလို့မရပါဘူး …. ဝေဝေခိုင်က “ကောင်လေး .. ဒါဘာလုပ်တာတုန်း၊ မင်းပစ်ဖဲကို နီလာစားပြီးဒေါင်းသွားတာလေ ” ၊ ဖြူဖြူမောင်က “အလှည့်ကျရင်မနွဲ့ကျစမ်းပေါ့ ကလေးရာ….. ဘောင်းဘီပါချွတ်လိုက်ပါ၊“ နီလာကလည်း “ ကဲမောင်ဇော် …. ဘောင်းဘီပါချွတ်ပေတော့ ၊ နင့်အလှည့်တုန်းက မောင်နှမချင်းတောင်မရှောင် ငါ့နို့ကို မျက်လုံးကျွတ်ကျမတတ်ငန်းထာားတာ” မောင်ဇော်ရှောင်မရတော့ပါ မတ်တမထရပ်ပြီးတော့ သူဝတ်ထားတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီကိုကြယ်သီးဖြုတ်ပြီး ဇစ်ကိုဆွဲချလိုက်ပါတော့တယ်။မောင်ဇော်တစ်ယောက် ကောင်မလေးသုံးယောက်ရှေ့မှာ မိမွေးတိုင်း ဖမွေးတိုင်း ဝတ်လှစ်စလှစ်ဖြစ်သွားပါပြီ။ ကောင်းမလေးတွေရှေ့မှာတုန်းလုံးချွတ်ရတာဆိုတော့ ရှက်တဲ့စိတ်တွေကြောင့် တောင်နေတဲ့လီးပြန်ကျသွားတယ်။
မောင်ဇော် သူ့ဖွားဖက်တော်လေးကို လက်နဲ့အုပ်ပြီးပြန်ထိုင်လိုက်တယ်။ ဝေဝေခိုင်က “ဘာ… အခုမှရှက်နေတာလဲ။ …… ချွတ်စရာမကျန်တော့ရင် ဒေါင်းတဲ့လူ ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်ရမှာနော်။” မောင်ဇော်ဘာမှပြန်မပြောလိုက်ပါ။ စိတ်ထဲမှာတော့ ဒီတစ်ခေါက်ဒေါင်းမဖြစ်မယ် မဟုတ်လို့ကတော့ မလွယ်ဘူး လို့မှတ်လိုက်တယ်။ ဆက်ဆော့တယ် ….. ကံအားလျှော်စွာပဲ မောင်ဇော်ဒေါင်းပါတော့တယ် ဖြူဖြူမောင့်ဆီက ပစ်ဖဲစားပြီးဒေါင်းတာပါ… မောင်ဇော်က “ ကဲ မမတို့ရေ အလှည့်ကျမနွဲ့ကျစတမ်းပေါ့…“ ကောင်မလေးသုံးယောက် သူတို့ဝတ်ထားတဲ့ ဘယာစီယာချိန်ကလေးတွေကိုအသီးသီးဖြုတ်ချ လိုက်ကြတယ်။. မောင်ဇော် ….. နို့ခြောက်လုံးကို အငမ်းမရလိုက်ကြည့်နေမိတယ်။ ပေါင်ကြားထဲက လီးကလဲ ဒုံးပျံကြီးတစ်စင်းကို ချက်ချင်းကိုပဲ အစွမ်းကုန်ထောင်မတ်လာပါတော့တယ်။ ဖြူဖြူမောင်က “ငါ့ဆီက ပစ်ဖဲကို စားပြီးဒေါင်းတာဆိုတော့ ငါထပ်ချွတ်ရဦးမယ်” ဆိုပြီး မတပ်ရပ် … သူ့အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးကို လိပ်ပြီးချွတ်လိုက်တယ်။ ဟိုနေ့ကမှ နီလာအမွေးရိတ်ပေးထားခဲ့ ဖြူဖြူမောင့်အဖုတ်လေးက ပြောင်ရှင်းဝင်းလက်လို့နေတယ်။ မောင်ဇော် မျက်စေ့ ဖြူဖြူမောင့် အဖုတ်ကနေမခွာတော့ဘူး။ ဖြူဖြူမောင် ဝတ်လှစ်စလှစ်နဲ့ပဲ တင်ပျဉ်ခွေထိုင်လိုက်တယ်။ မောင်ဇော့မျက်စေ့ ကပ်ပါလာတယ်။ ဖြူဖြူမောင်က “ကောင်လေး မမြင်ဖူးဘူးလား….“ မောင်ဇော်က “ ဒါအပြင်မှာပထမဆုံမြင်ဖူးတာပဲ …“ နီလာက “နှာဘူးလေး …. ငါကုလားဖန်ထိုးပြီးပြီ ဝေတော့။နင့်ဟာကြီးကတရမ်းရမ်းနဲ့ ဖဲချပ်တွေနဲ့တိုက်မိဦးမယ်“ ဟုတ်ပါတယ် …… ကြီးမားရှည်လျားတဲ့မောင်ဇော့်လီးကြီး အစွမ်းကုန်ထောင်မတ်နေတယ်။
ကောင်မလေး သုံးယောက်က လည်းအဲဒိလီးကြီးဆီက မျက်စေ့ကိုမခွာတော့ပါဘူး။ …… မောင်ဇော် ဖဲထုတ်ကောက်ကိုင်ပြီးဝေလိုက်တယ်။ မျက်စေ့ထဲမှာ ပြောင်ရှင်းနေတဲ့ ဖြူဖြူမောင့်အဖုတ်လေးနဲ့ ကောင်မလေး(၃) ယောက်ရဲ့နို့တွေပဲမြင်နေတယ်။ ဝေပြီးဖဲချပ်တွေကောက်ကိုင်ရေလိုက်တော့ …. နီလာက “ဖဲဝေမှားတယ်ဟေ့…… ငါ့ဆီမှာ ၁၂ ချပ်ပဲရှိတယ်…. မောင်ဇော် ….. နင်တုတ်ပျက်ပြီ“ မောင်ဇော်က “ဟာ …တုတ်မိလည်း မမတို့ဆီမှာ ချွတ်စရာတစ်ခုပဲရှိတော့တဲ့ဟာကို့“ ဖြူဖြူမောင်က “ ကောင်လေး မင်းစိတ်တွေဘယ်ရောက်နေလဲ ဖဲတောင်မှားဝေရတယ်လို့ ….. မဖြစ်ပါဘူး ငါဒီကောင်လေးကို အကြောလျှော့ပေးမှရတော့မယ် “ ဆိုပြီး … ပြောပြောဆိုဆိုပဲ လွှတ်တော့မဲ့ဆဲဆဲ ဒုံးပျံကြီးလိုထောင်မတ်နေတဲ့ မောင့်ဇော့လီးကြီးကို သူ့လက်ဖြူဖြူနုနုလေးနဲ့ လာဆုပ်လိုက်ပါတယ်။ွဖြူဖြူမောင်ဆုပ်ထားတဲ့ မောင်ဇော့်လီးကြီးဟာ ငါးရံ့အရှင်တစ်ကောက်လိုပဲတစ်ဆတ်ဆတ်နဲ့ လက်ထဲမှာခုံနေတယ်။ ဖြူဖြူမောင်က အသာလေးဂွင်းတိုက်ပေးနေတယ်။ လီးထိပ်မှာအရည်ကြည်လေးတွေတောင် စို့လာတယ်။ ကျန်တဲ့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်လဲ ဖဲဝိုင်းကိုစိတ်မဝင်စားတော့ဘူး။ မောင်ဇော့်ကို ဖြူဖြူမောင်ဂွင်းတိုက်ပေးတာကိုပဲစိတ်ဝင်တစားကြည့်နေတယ်။ မောင်ဇော်တစ်ယောက်လဲကတုန်ကရင်နဲ့ တင်ပြင်ခွေထားတဲ့ခြေထောက်တွေဖြေပြီး ခြေဆင်းချလိုက်တယ်။
ဝေဝေခိုင်က ” မောင်ဇော် နင်မိန်းခလေးတွေကို လုပ်ဖူးလား” မောင်ဇော်က ” ဟင့်အင်း မလုပ်ဖူးဘူး” ဖြူဖြူမောင်က ” ဝေဝေခိုင်ရေ ဒီနေ့ညတော့ ငါတို့နှစ်ယောက် သူတို့မောင်နှမကို ရှင်ပြုပေးလိုက်ကြရအောင် ဟေ့ ….” ဆိုပြီး ပြောပြောဆိုဆိုပဲ ကျန်တဲ့လက်တစ်ဘက်က မောင်ဇော့်ဂွေးဥကိုပါ ခပ်ဖွဖွကိုင်လိုက်ပြီး နှပ်ခမ်းချင်းလည်း ကပ်လိုက်တယ်။ …. တပြိုင်နက်ထဲပါပဲ ….. ဝေဝေခိုင်ကလည်း နီလာ့နို့တစ်လုံးကို ပါစပ်နဲ့အသာလေးစုပ်ယူကြီး ကျန်တဲ့နို့တစ်လုံးကို လက်တစ်ဘက်နဲ့ ခတ်ဖိဖိလေးပွတ်ပေးနေလိုက်တယ်။ နီလာ စိတ်တွေကြွလာတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့မောင်ရှေ့မှာဆိုတော့ ရှို့တို့ရှန့်တန့်နဲ့… နီလာက “ဝေဝေခိုင်ရယ် နင်ကလည်း မောင်လေးရှေ့မှာဘာတွေလုပ်နေလဲမသိဘူး” ၁၀ မိနစ်ခန့်ကြာတဲ့အခါ ကောင်မလေး (၃) ယောက်နဲ့ မောင်ဇော်တစ်ယောက် တော်တော်အရှိန်ရနေပြီ။ ဖြူဖြူမောင်ကမောင်ဇော့လီးကိုစစုပ်နေပြီး မောင်ဇော်က ဖြူဖြူမောင့်အဖုတ်ကို သဲကြီးမဲကြီးနှိုက်နေတယ်။
နီလာနဲ့ဝေဝေခိုင်လည်း တစ်ယောက်အဖုတ်တစ်ယောက် အပြန်အလှန်နှိုက်နေတယ်။ ဖြူဖြူမောင်က ကုတင်ဇောင်းမှာ ခြေတွဲလွဲချလို့ပက်လက်လှန်လိုက်ပြီး မောင်ဇော့လီကို အဖုတ်နဲ့တေ့ထားတယ်။ အဖုတ်နှုပ်ခမ်းတွေတလျှောက် အထက်အောက်စုန်ချည်ဆန်ချည် ၄ /၅ ချက်လောက်ပွတ်ဆွဲလိုက်တာ မောင်ဇော်မနေနိုင်တော့ဘူး ခါးလေးကိုကော့ပြီး အဖုတ်တဲကိုလီးအတင်းသွင်းတော့တာပဲ။ ဖြူဖြူမောင်က သူ့အဖုတ်လေးကို လက်ကလေးနဲ့ အုပ်ထားလိုက်ပြီး … ” ကောင်လေး နင်ငါ့ကိုအရင်မလုပ်နဲ့ ပါကင် ပါကင်ချင်း ငါတို့ကပေးလုပ်မလို့ နင့်အစ်မကိုနင်အရင်လုပ်” မောင်ဇော်က “ဟာ ကျွန်တော်တို့ ကမောင်နှမချင်းလေ” ဝေဝေခိုက်က ကြားဖြတ်ပြီး ” မောင်နှမချင်းတွေဘာတွေလုပ်မနေနဲ့ နင့်အစ်မကို နင်ပဲ ပါကင်ဖေါက်လိုက်” ပြောပြောဆိုဆိုပဲ ကိုယ်တုန်းလုံးဖြစ်နေတဲ့ နီလာ့ကို ကုတင်ပေါ်ခေါ်လာပြီး ပက်လက်ထားလိုက်တယ်။ နီလာက “ဖြစ်ပါ့မလားဟယ်” ဖြူဖြူမောင်က “မဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူး..” မောင်ဇော်လည်း ခပ်ရွံ့ရွံ့နဲ့ပဲ နီလာ့နားကိုတိုးသွားတယ်။ နီလာကတော့ မျက်စေ့နှစ်လုံးစလုံး မှိတ်ထားလိုက်တယ်။ ဖြူဖြူမောင်က နီလာ့နားမှာယှဉ်အိပ်ပြီး နီလာ့နို့တွေကိုစို့ပေးတယ် လက်တစ်ဘက်လည်း နီလာ့အစေ့လေးကို လက်ခယ်လေးနဲ့ ခပ်ဖိဖိလေးပွတ်ပေးနေတယ်။ ဝေဝေခိုင်က မောင်ဇော့် လီကိုလက်နဲ့အသေအချာကိုက်ပြီး နီလာ့အဖုတ်အဝမှာတေ့လို့ ဒေါင်လိုက် ၄ချက် ၅ ချက်လောက်ပွတ်ဆွဲလိုက်တယ်။
နီလာ့အဖုတ်က အရည်ကြည်လေးတွေ စိမ့်ထွက်လာတယ်။.. မောင်ဇော့်လီးထပ်လည်း ကျိန်းပြီး လီးကြီးက ခဏကထက်တောင်ပိုပြီးမာလာတယ်။ အကြောကြီးတွေကလည်း လီးကို နဂါးကြီးတစ်ကောင်ပတ်ထားသလို ဖေါင်းကြွလာတယ်။ ဝေဝေခိုက်က လီးကို နီလာ့အဖုတ်အဝမှာသေချာတေ့ပေးပြီး မောင်ဇော့်ကို “စလုပ်တော့ ဖြည်းဖြည်းလုပ်နော် ….. နင့်အစ်မအော်ရင် ခဏနား ပြီမှပြန်လုပ်” အဖုတ်ရည်တွေနဲ့ ရွှဲနေတဲ့လီးကိုမောင်ဇော် နီလာ့အဖုတ်ထဲထိုးထည့်လိုက်တယ်။ နီလာက လန့်ပြီး အကနဲတစ်ချက်အော်လိုက်တယ် ဘာမှမဖြစ်ဘူး မောင်ဇော် ဖြည်းဖြည်းချင်း စမ်းသွင်းတယ် လီးဒစ် မြုတ်ရုံလောက်ပဲဝင်တယ်။ ရှေ့မှာ နံရံတစ်ခုက ကားထားတယ် လီးဆက်သွင်းလို့မရတော့ဘူး … ဒစ်မြုတ်ရုံလောက်ဝင်တာကိုက မောင်ဇော့အတွက် အရမ်းအရသာရှိနေပြီ နီလာ့အတွက်လည်း ဖေါ်မပြနိုင်တဲ့အရသာတွေ အပြည့်။ ဒါပေမဲ့ လီးကဒီ့ထက်ဆက်ဝင်မလာတော့ နီလာအားမလိုအားမရဖြစ်လာတယ်။ နီလာက ” မောင်ဇော် … ဆက်သွင်းလေဟာနင်ကလည်း” ဖြူဖြူမောင်က ” ဟဲ့အဲဒါနင့် အပျိုမှေးခံနေလို့ဟဲ့ …. မောင်ဇော်ရေ ခပ်ဆပ်ဆပ်လေးသာစောင့်ထိုးလိုက် အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်။ နီလာ နည်းနည်းနာမယ်နော် .သတိထား”..မိန်းမတစ်ယောက်ကို လက်တွေ့ကျကျလိုးဖူးတာ မောင်ဇော့်အတွက် ဒါပထမဆုံးအကြိမ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ စာအုပ်တွေ။ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ ဖတ်ဖူးသိဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေအရတော့ ပါကင်ကိုဘယ်လိုဖေါက်ရမယ်ဆိုတာ ကြားဖူးနားဝရှိထားပြီးသား… မောင်ဇော် သူ့လီးကိုသူ့လက်နဲ့ကိုင်ပြီး ဒစ်မြုတ်ရုံလောက် ၁၀ ချက်လောက်အသွင်းအထုတ်လုပ်လိုက်တယ်။ နောက် အစ်မဖြစ်သူနီလာ့ အဖုတ်ထဲကထွက်လာတဲ့ အရည်ကြည်တွေကိုလီးတစ်ချောင်းလုံး လိမ်းပစ်ပြီး အဖုတ်အဝကိုလီးတေ့လို့ အားနဲ့ဆောင့်သွင်းထည့်လိုက်တယ် နီလာအဖုတ်ထဲမှာ မျက်ခနဲတစ်ချက်ဖြစ်သွားပြီး အား လို့တစ်ချက်အော်လိုက်တယ်။
မောင်ဇော့်လီးလဲတစ်ဝက်လောာက်အဖုတ်ထဲဝင်သွားတယ်။ ဖြူဖြူမောင်က ” မောင်လေး ….ပြန်မထုတ်နဲ့ ဆက်သွင်းလိုက် …. ဖြည်းဖြည်းချင်းသွင်း ” မောင်ဇော်ကလည်း ဖြူဖြူမောင်ပြောတဲ့အတိုင်း လီးကိုပြန်မထုတ်ပဲ ဖြည်းဖြည်းချင်းဖိသွင်းလိုက်တာ အဖုတ်ထဲလီးတစ်ချောင်းလုံးဝင်သွားပါတော့တယ်…. နီလာက “နာလိုက်တာမောင်ဇော်ရယ်… နင့်ဟာကြီးကလည်း ကြီးလိုက်တာ ” ဝေဝေခိုင်က “နာတာတွေ မနာတာတွေနောက်မှပြော နင်ပြီးရင်ငါတို့အလှည့်ကျန်သေးတယ် မောင်လေးမောင်ဇော်ရေ မင်းအစ်မ ကောင်းသွားအောင် လုပ်ပေးလိုက်ကွာ” မောင်ဇော်လည်းလက်နှစ်ဘက်ကို ကုတင်ပေါ်မှာသေချာထောက်ပြီး နီလာ့အဖုတ်ထဲနစ်ဝင်နေတဲ့ သူ့လီးကိုဖြည်းဖြည်းချင်း ဒစ်နာရောက်တဲ့အထိ ဆွဲထုတ်ပြီး ကြည့်တယ် လီးမှာအရည်ကြည်လေးတွေနဲ့အတူ သွေးစသွေးနလေးတွေကပ်ပါလာတာတွေ့တယ်။ သူ့အစ်မက ပါကင်ပေါက်သွားပြီ။… လီးကိုအဖုတ်ထဲဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်သွင်းတယ်။ အဖုတ်ရဲ့အတွင်နှုပ်ခမ်းသားလေးတွေ လီးနဲ့အတူလိပ်ပြီး အထဲဝင်သွားတယ်။ နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ထုတ်တယ် အဖုတ်နှုပ်ခမ်းသားလေးတွေပြန်ပါလာတယ်။ မောင်ဇော် တဖြည်းဖြည်းမြန်လာတယ်။ နီလာကလည်း အောက်က တအင်းအင်းနဲ့ညီးနေတယ် ဖြူဖြူမောင်ကလည်း ပါးစပ်ကနီလာ့နို့နှစ်လုံးကို ပြန်လှန်တစ်လှည့်စီစို့နေပြီး လက်တစ်ဖက်က သူ့အဖုတ်သူနှုက်နေတယ်။
ဝေဝေခိုင်က မောင်ဇော့ရှေ့တည့်တည့်မှာလေးဖက်ထောက် ဖင်ကြီးကုန်းပြီး သူ့အဖုတ်ကို လက်တစ်ဘက်နဲ့ ပွတ်နေပြီး… “မောင်ဇော် ငါနင့်ကို ဖင်ကုန်းပြမယ် နင်ငါ့ဖင်ကြီးကိုကြည့်ပြီး နင့်အစ်မနီလာကို အားရပါးရလိုးစမ်းဟာ ….” မောင်ဇော့်မျက်စိရှေ့မှာ ဝေဝေခိုင့်ဖင်ပြောင်ကြီးက ပြူးလို့ အဖုတ်အကွဲကြောင်းကြီးတစ်ဝိုက်လည်း အရည်တွေတစ်လက်လက်နဲ့ … မောင်ဇော်တစ်ယောက်ဝေဝေခိုင့်ဖင်ကြီးကိုကြည့်ရင်း စိတ်တွေအရမ်းကြွလာတယ်။ နီလာ့အဖုတ်ကိုလိုးနေတဲ့ သူ့လီးကလည်း ပိုပြီးမာမာလာသလိုပဲ။ မောင်ဇော်တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် ဒီလောက်မာတင်းနေအောင် တစ်ခါမှလီးမတောင်ဖူးဘူး… မောင်ဇော် စိတ်ရှိလက်ရှိ နီလာ့ကို လိုးပါတော့တယ်။ အချင် ၃၀ လောက်စောင့်ပြီးတဲ့အခါမှာ နီလာတစ်ယောက် “မောင်လေး .အား … အား …. ကောင်းတယ် ကောင်းတယ် …အီး … မော်လေး .. မောင်ဇော်” ဆိုပြီး လက်နှစ်ဘက်နဲ့မောင်ဇော့် ကျောပြင်တစ်လျှောက် ကုပ်ဆွဲရင်းတွန့်လိမ်ကောက်ကွေးလို့တစ်ချီပြီးသွားပါတော့တယ်။ မောင်ဇော်လည်း နောက်ထက် အချက် ၂၀ လောက်ခပ်သွက်သွက်ကလေးစောင့်လိုက်တာ တစ်ကိုယ်လုံးက အကြောတွေစိမ့်ကနဲ စိမ့်ကနဲနေပြီး နီလာ့အဖုတ်ထဲ လရည်တွေပန်းထုတ်လို့ ပြီးသွားပါတော့တယ်။…မောင်ဇော်တစ်ယောက် နီလာ့ ကိုယ်ပေါ်ကနေခွာပြီး အိပ်ယာပေါ်မှာပက်လက်လေးလှန်လိုက်တယ် တစ်ချီလိုးပြီးသွားပေမဲ့ သူ့လီးက သိပ်မကျသေးဘူး။ ထောင်မတ်မနေတာပဲရှိတာ။ ဝေဝေခိုင်က လီးမှာပေနေတဲ့ အဖုတ်ရည်တွေနဲ့ လရည်တွေကို တစ်ရှူးစလေးနဲ့ သေသေချာချာသုပ်ပေးနေတယ်။
လက်တစ်ဖက်ကသုပ်ရင် ကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်ကလည်း ဂွေးဥလေးကိုဆွပေးလိုက်၊ ဂွင်းထူသလိုလုပ်ပေးလိုက်နဲ့ ဆိုတော့ မောင်ဇော့်လီးလည်း သိပ်မကြာလိုက်ဘူး ပြန်ပြီး ရာနှုံးပြည့် ထောင်မတ်လာတာပဲ …… လီးထောင်လာတော့ ဝေဝေခိုင်က လီးထိပ်ကလေးကို ပါးစပ်နဲ့ အသာသယာငုံတယ်။ လျှာလေးနဲ့ ဒစ်ကိုပတ်ပြီး ကစားတယ်။ …. မောင်ဇော် ကျဉ်တက်သွားပြီး ပါးစပ်က အ … အ … လို့တောင်အော်ယူရတယ်။ ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ လီးထိပ်မှာ အရည်ကြည်လေးတွေ ပြန်စုလာတယ်။ ဖြူဖြူမောင်က ” ငါတို့အလှည့်တော့ရောက်ပြီ …. မောင်လေးမောင်ဇော်ရေ မင်းကို ရည်ရည်လည်လည် ဖီးဖြစ်သွားမောင် မမတို့နှစ်ယောက်ဝိုင်းပြုစုပေးမယ်။” လို့ပြောပြီး မောင်ဇော့ရဲ့ လူပျိုနို့သီးခေါင်းသေးသေးလေးကို မရမကအတင်းပဲ သွားလေးနဲ့ ခပ်ဖွဖွကိုက်လိုက်တယ်။ လက်တစ်ဘက်ကလည်း ကျန်တဲ့မောင်ဇော့နို့သီးခေါင်းလေးကို လက်ညှိုးနဲ့လက်မနှစ်ဘက်ညှပ်ပြီး ခပ်ဆပ်ဆပ်လေးပွတ်ချေပေးလိုက်တယ်။. မောင်ဇော့်ခင်ဗျာလည်း ကောင်မလေးတစ်ယောက်က အောက်ပိုင်းမှာ လီးစုပ်တဲ့အရသာ ကျန်တစ်ယောက်က နို့သီးလေးတွေကို ပွတ်ချေကိုက်ဆွဲပေးတဲ့အရာ အရသာတွေကို တပြိုင်နက်ထဲခံစားပြီး သူ့လီးကြီး ဟာ သံချောင်းကြီးအလား မာတောင်လာပါတော့တယ်။ ဖြူဖြူမောင်က “ဝေဝေခိုင်ရေ ငါအရင်ခံချင်တယ်ဟယ် နင်နောက်မှခံနော်” လို့လှမ်းပြောလိုက်တယ် ဝေဝေခိုင်ကလည်း ” ရပါတယ် ငါပါရမီဖြည့်ပေးတာပေါ့” ဆိုပြီး စုပ်နေတဲ့ မောင်ဇော့လီးကိုပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်။
ဖြူဖြူမောင်က အိပ်ယာပေါ်မှာ ဒတောင်နှစ်ချောင်းနဲ့ထောက်၊ ဖင်ကုန်းပြီး ခါးလေးကိုညွှတ်ထွားလိုက်တယ် ပြောင်ဝင်းနေတဲ့ဖင်ဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေးနှစ်လုံးနဲ့ အမွေးကင်းစင်တဲ့ အဖုတ်ညိုစိမ့်စိမ့်လေးဟာ မောင်ဇော့ကို လက်ယက်ခေါ်နေသလိုပဲ။ …. မောင်ဇော်လည်း ဖြူဖြူမောင် ကုန်းထားတဲ့ဖင်ကိုကြည့်ပြီး စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ပဲ လီးကိုအဖုတ်အဝမှာတေ့လို့ အသားကုန်စောင့်ချလိုက်တာ လီးတစ်ချောင်းလုံးအဖုတ်ထဲဝင်သွားပြီး …… ဖြူဖြူမောင်တစ်ယောက် “အား … မောင်လေးရယ်။ ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါဟဲ့ ငါ့အဖုတ်တော့ကွဲတော့မှာပဲ …။” ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ဆွဲထုတ်နော်” မောင်ဇော် ဖြူဖြူမောင့်အဖုတ်ထဲက သူ့လီးကို ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်စွဲထုတ်တယ်။ အဖုတ်နှုပ်ခမ်းသားလေးတွေ လိပ်ပြီး ပါလာတယ်။ နောက် ဒစ်နားရောက်တော့မှ ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်သွင်းတယ်။ ခုနက စူထွက်လာတဲ့ နှုပ်ခမ်းသားလေးတွေ လိပ်ပြီး ပြန်ဝင်သွားတယ်။ … အဲလို ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက် ၁၀ ချက် ၁၅ ချက်လောက်လုပ်ပြီးတော့ မောင်ဇော့်လက်နှစ်ဘက်ကို ဝေဝေခိုင်က ကိုင်ပြီး လေးဘက်ကုန်းထားတဲ့ ဖြူဖြူမောင့်နို့နျစ်လုံးကို လှမ်းကိုင်ခိုင်းတယ်။ မောင်ဇော်လည်း ခပ်ကုန်းကုန်းအနေအထားလေးအတိုင်းခပ်သွက်သွက်လေးစောင့်ပေးတယ်။. ဝေဝေခိုင့်လက်တစ်ဘက်ကလည်း ဖြူဖြူမောင့်အဖုတ်ထဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့ မောင့်ဇော့လချောင်းကြီးနားကဂွေးဥကလေးကို ကစားပေးနေတယ်။
ဝဝေခိုင်က “မောင်ဇော် … မောင်လေး။ မိန်းမတွေကို လိုးတယ်ဆိုတာ အသွင်းအထုတ်မြန်မြန်လုပ်ဖို့ထက် တိုင်ပင် မှန်ဖို့လိုက်တယ်။ ပြောချင်တာက ဒီလိုကွာ အဖုတ်ထဲကို လီးအဝင်အထွက်တစ်ခါလုပ်လို့ တစ်စက္ကန့်ကြာတယ်ဆိုရင် နောက်တစ်ခါ အဝင်အထွက်လုပ်တိုင်းလည်း တစ်စက္ကန့်စီကြာဖို့လိုတယ်။” “အေးဟုတ်ပြီ အဲလို တိုင်ပင် မှန်မှန်လေးလုပ်ပေး” မကြာသေးခင်အချိန်ပိုင်းကလေးကမှ လိုးတယ်ဆိုတာကို လက်တွေ့ကျကျ နှဖူးတွေဒူးတွေ့လုပ်ဖူးတဲ့မောင်ဇော်တစ်ယောက် … ပထမတစ်ကြိမ်ထဲမှာတင် ကောင်မလေး ၃ ယောက်ကို တစ်ဆက်ထဲလိုးခွင့်ရလိုက်ပါတော့မယ်။ အခုလည်းဒုတိယမြောက်တစ်ယောကို လိုးနေပြီ … မောင်ဇော် တိုင်ပင် မှန်မှန်လေးလိုးပေးလိုက်တဲ့အတွက် ဖြူဖြူမောင်တစ်ယောက် ကာမအထွဋ်အထိပ်ရောက်ဖို့ အတွက် ဒီဂရီတွေဟာ ဒီရေတွေအလား တရိတ်ရိတ်တက်လာပါတယ်။ ဖြူဖြူမောင် ဒီဂရီတွေတက်လေလေ….အဖုတ်ထဲကဖြစ်ညှစ်ဆွဲသလိုဖြစ်ပြီး မောင်ဇော်လည်း ကောင်းလေလေ… စောင့်ချက်တွေလည်း အားပါပြီးမြန်လေလေဖြစ်လာပါတယ်။
ဖြူဖြူမောင်က ” မောင်ဇော် ခဏရပ်ဦး ငါဒီပုံစံနဲ့ပြီးတာမကြိုက်ဘူး ပက်လက်လေးပြီးချင်လို့” ဆိုပြီး ဖင်ကုန်းထားရာကနေ ကိုယ်ကိုလှဲချလိုက်ပြီး ပက်လက်လှန်လိုက်တယ် မောင်ဇော်လည်း ချက်ချင်းပဲ အပေါ်ကတက်ခွပြီး လှေကြီးထိုးပုံစံနဲ့ အဖုတ်ထဲကိုလီးပြန်ထည့်ပြီး တိုင်ပင် မှန်မှန်လေးလိုးပါတော့တယ်။ မောင်ဇော်လိုးပြီးသွာားလို့ မှိန်းနေတဲ့နီလာကလည်း ပြန်လန်းဆန်းလာပြီး ဖြူဖြူမောင့်နို့တစ်ဘက်ကို ပါးစပ်နဲ့စို့ နောက်နို့တစ်ဘက်ကို လက်နဲ့ဆုပ်နယ်ပေးနေပါပြီ …. အချက်သိပ်များများတောင်မလိုးလိုက်ရပါဘူး ဖြူဖြူမောင်တစ်ယောက် တွန်းလိန်ကောက်ကွေးလို အား… အိုး…. အိုး … မောင်ဇော် … မောင်လေး မမပြီးပြီ … ပြီးပြီး … အား …. ဟား … အား … ဆိုပြီ့း မောင်ဇော့ လက်မောင်နှစ်ဘက်ကို အသားကုန်ဆုပ်ထားလို့ ပြီးသွားပါတော့တယ် မောင်ဇော်လည်း ဖြူဖြူမောင့်အဖုတ်ရဲ့ ညှစ်အားတွေရယ်။ ဝေဝေခိုင်က နောက်ကနေ ဂွေးဥနှစ်လုံးကို ကစားပေးနေတာတွေရယ်ကြောင့် မရှေးမနှောင်းဆိုသလို မမ … အား …. အား … မမ .. ဆိုပြီး ဖြူဖြူမောင့်အဖုတ်ထဲကိုလရည်တွေပန်းထည့်လိုက်ပါတော့တယ်။…ပြီးး